SPM News: Somali 4.23.22
Published April 23, 2022 at 3:32 PM CDT
﻿Maxkamadda Sare ee Iowa ayaa sheegtay in laba makhaayadood aysan ka qaadi karin magdhow siyaasadaha caymiska ganacsigooda. Taasi waxay dhacday ka dib amarkii gudoomiyaha ee Maarso 2020 ee u baahan in makhaayadaha ay si ku meel gaar ah u joojiyaan cuntada qof ahaaneed iyadoo ay sii kordhayaan kiisaska COVID-19.Caymisyadu waxay ku doodeen in aanay jirin dhinacyo jidheed oo khasaare ah, sidaa awgeedna aanay ahayn inay bixiyaan, maxkamaduna si wada jir ah ayay u ogolaatay.
Xoghayaha Arimaha Dibada Paul Pate ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo sharci-dejiyeyaasha si loo hubiyo in sharciga gobolka uu si cad uga baahan yahay Iowans ee saxiixa waraaqaha magacaabista musharixiinta inay ku jiraan taariikhda ay saxiixeen codsiga.
Maxkamadda Sare ee Iowa ayaa xukuntay usbuucii hore khaladaadka taariikhaha ku xiga saddexda saxeex ee musharaxa senate-ka ee Maraykanka Abby Finkenauer's magacaabista codsiyada kama diidin Finkenauer warqadda codbixinta ee Primary June.
U doodayaasha Haweenka Asaliga ah ee La Laayay ayaa maanta oo Axad ah ku qabanaya isu soo bax taageero ah magaalada Santee ee gobolka Nebraska. Munaasabadda ayaa dhici doonta 4-ta galabnimo ka baxsan Xarunta Bulshada ee Santee.
Munaasabadan ayaa la soo agaasimay ka dib geeridii xubin ka tirsan qabiilka Ashleigh Wabasha. Meydka 19-jirka ayaa la helay Isniintii kadib markii la waayay 27-kii Maarso. FBI-da ayaa kiiska gacanta ku haysa, mana soo saarin xog dheeraad ah. Hay'addu waxay baartaa dambiyada ugu daran ee ka dhaca Dalka Hindiya.
Nebraska ayaa ku jirta kaalinta lixaad ee liiska dawladaha ugu badan ee la la'yahay ama la dilay dumarka asaliga ah, sida uu qabo Red Ribbon Skirt Society.
Google ayaa sheegtay in in ka badan $750 milyan ay ku maalgelin doonto Nebraska sanadka 2022, maalgelin ay ku jirto dhismaha xarunta xogta ee Omaha. The Omaha World-Herald ayaa sheegtay Khamiista in maalgelinta ay sidoo kale ku jirto ballaarinta xarunta xogta Google ee hadda jirta ee Papillion.